Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): Myanmar out from Malaysia ( sadi ga law Malaysia Kachin )
Myanmar out from Malaysia ( sadi ga law Malaysia Kachin )
at 5/22/2015 01:48:00 AM
JingHpaw Hkaw Hkam
Malaysia mungdan kaw du nga ai Wunpawng sha ni yawngamatuahkyak ai shiga
Dai ni n htoi 21 May 2015 ya jahpawt kaw malaysia mungdan masha ni hku na myen mung asuya kaw na hpaw da ai mungdan kyit hkai Rung kaw mung shawa n gun ma dun ai lam galaw wa ai lam hpe chye lu ai.
madung yaw shada ai lam gaw myen mung asuya gaw Rohingya ni hpe myen mung gata na tsep kawp gawt shapraw ai lam re ai ngu ai, hte
myen masha ni malay kaw grai law sai lam bai na manghkang mung grai law ai majaw n dai zawn shawa n gun madun let myen mung kyit hkai rung hpe mung malaysia kaw n nga ra ai lam jahtau tsun ai lam chye lu ai
Dai re ai majaw malaysia du nga ai wunpawng myu sha ni shimlamamatu hkawm sa hkawm wa hta san jep ai lam ni nga wa yang myen n re ai lam Kachin re ai lamatsawm tsun dan chye ra na masa nga ai lam chye lu ai malaysia du wunpawng myu sha ni hpe lam shagu kaw na Karai wa shalawt ya u ga .
Lamhkawm ai hkan ,Bung li hkan, shara shagu hta Myen ga n shaga ai gaw grau kaja ai.
Malaysian ni Myen ga re hpe atsawm chye na ma ai re,Bai na Myen ga chye na ai Rohingja ni mung malaysian ni hpe garum taw ai re majaw sadi ai gaw kaja dik re
ပူတာအိုရှိ ကျေးရွာအချို့တွင် ကျွဲးနွားသေဆုံးမှုဖြစ်...
KIA Masat (11) Dap Dung Ginra Hta Gasat Poi Byin A...
Social Democracy (Europe) hte Democratic Capitalis...
Ndai laika mu hti hkrup ,rasha mat na bai shalai ...
ရိုဟင်ဂျာအရေး နော်ဝေမှာ ညီလာခံ လုပ်
USA, အိုမဟာမြို့ တွင် (၁၉)ကြိမ်မြောက် KAA, မနော ပွ...
Conflict Resolution Analysis on Current Armed Conf...
10 Reasons to loveaWungpawng Shayi
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်မြို့က ဘဏ်တွေကို KIA
Federal Law Academy
lying faces of peace dealings.
အေရှားဝေါ ( Asia world )
Myanmar out from Malaysia ( sadi ga law Malaysia K...
မြန်မာသံရုံး မလေးရှားမှ ထွက်သွားရန် မလေးရှားများ ဆ...
ဝပြည်နယ် တရားဝင် တောင်း။
Burma Army Shoots, Tortures and Murders Civilian
Editor Jangai Jap hte American mung dan Na Kachin ...
George W. Bush: C students, you too can be preside...
ထုတ်လုပ်ရောင်းချမှု ထူချွန် အသေးစား စီးပွားရေး လုပ...
သန်းရွှေတို့နအဖတွေရဲ့ဘုရား တရား သံဃာ
Jade land Kachin ( Hpa kant )စွန့်ပစ်မြေဇာပုံ မှာေ...
Ya Kalang Bai Shalai Kau Hkyen Sai / Yawng alu sha...
ကိုးကန့်စစ်ပွဲ တစ်စခန်း ရပ်ခဲ့ပြီလား
U Ravika37 mins · Edited · ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ သ...
ကိုးကန့်မြေကိုရောက်လာတဲ့ ကျူးကျော်ရေးသမား မြန်မာ့တ...
Duwa Zan Hta Sin: A Profile In Leadership
ဝ လူမျိုး ၊ ဝ မြို့ အကြာင်းလေး ပါ
မန်မာနိုင်ငံရဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒက ဂျာမဏီနိုင်ငံက ဟစ...
တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ လည်ပင်းကို တက်နင်း ပြီး ရွေးကေ...
ကိုးကန်းစစ်ရေးသတင်း ( Kokang news )
Salum Chyen Mi Hu Gawng Shayi ( Yungwi hkam sha yu...
ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကို ဂရုမစိုက်ကြောင်း မအလပြသ
INSIDE K.N.U BBC & Daw Su Sanda Hla Hla soe (K.W....
ပူတာအိုဒေသ ဖမ်းမိသောဗမာစစ်သား နဲ့ ဒေသတွင်းမူးယစ်ေ...
နိုင်ငံတကာ ပံ့ပိုးမှုကိုလည်း အစိုးရက ထိန်းချုပ်ထာ...
Majan4ning hpring ladu hkrum nhtoiamatu tau hk...
Kachin Japan ( KNO ) Kaw nna Sam Mung Kawng Hka ka...
သတိထား စောင့်ကြည့်ရမည့် ပန်းဆမ်း ဆွေးနွေးပွဲ
ကေအိုင်အို ဥကဌ နှင့် ဒု ဥကဌ
ခါင်းဆောင်တွေ စုံညီတုန်း လေကြောင်းကာကွယ်ရေးလက်နက်ေ...
ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲ ဒုတိယ နေ.
၀´ ပြည် ဌာနချုပ်၊ ပန်ဆန်း တိုင်းရင်းသား လက် နက်ကို...
Wa State News Agency ကနေရုပ်သံသတင်းတင်ဆက်ထားပါတယ်...
ခေါင်ဆောင်များအစည်းအဝေးဆိုက်ရောက်လာပြီး နောက် E.A...
Gum San NSang One of the most diligent politician...
“Karai jaw ai Mung masa pan dung”
(Mazut gum shem ai ladat hte nmai jang Sau zawn ga...